8 Zvikonzero Iwe Unonzwa Senge Iwe Hausi Wekuti Ive Kwese - Blog
8 Zvikonzero Iwe Unonzwa Senge Iwe Hausi Wekuti Ive Kwese
Wati wambonzwa here sekuti iwe hausi wekwawo?
Kufanana newe iwe hausi kukodzera kwakanaka kune vanhu vakakukomberedza?
Iko kunzwa kwakajairika uko vazhinji vese vanowana kamwe chete muhupenyu hwavo.
Dzimwe nguva isu tingave tichingove tichipfuura nepakati pechinguva chakaoma nguva apo patinonzwa kuti hatigoni kunyatsoenderana kune chero munhu.
sei kusave unonamira mukomana
Dzimwe nguva zvinogona kunge zviri mhedzisiro yechinhu chakadzama chinoda kugadziriswa nerubatsiro rwehunyanzvi hwepfungwa.
Chero nzira, kuda kwekuve chinhu chikamu chekuve munhu. Wese munhu, kune imwe nhanho, anoda kunzwa sekunge ane hukama kune mumwe munhu akavapoteredza.
Kana, izvozvi, iwe uchinzwa senge iwe usingaenderane nevanhu nenzvimbo dzakakukomberedza, panogona kunge paine chikonzero chazvo. Chikonzero chakadai se:
1. Maonero ako epasi kana hunhu hwakasiyana pane zvakajairwa.
Nyika ine musoro here? Kwete kazhinji.
Zvakaoma kuziva nzvimbo yemunhu pasi kana iwe uchigara uchibhombwa kubva kumativi ese kubva pasocial media, echinyakare midhiya, shamwari dzako nemhuri, kana kunyange vaunoshanda navo vanonzwa iwe uchifanira kuona nyika nenzira imwe cheteyo yavanoita.
Haasi munhu wese anoita, uye izvo zvakanaka. Zvinotora akawanda maonero akasiyana, mazano, uye zviito kuita kuti nyika itenderere.
Maonero epasirese epasi kana hunhu unogona kunzwa kusurukirwa nekuti ungangonzwa kusanzwisiswa. Uye kana haunzwi kunzwisiswa , hauzonzwa kunge uri wega.
Nzira yakanaka yekupokana nemanzwiro aya ndeyekutsvaga vamwe vanhu vanoona nyika kuburikidza nemeso akafanana. Tarisa mumapoka, zviitiko , kana nzvimbo dzaunogona kusangana nevamwe vanhu vane maonero akafanana uye zvavanofarira.
2. Hausi iwe kuzviratidza tsime.
Iko kugona kwekutaura zvakajeka zvaunofunga uye nemanzwiro aunoita kunoenda kure kure kukubatsira iwe kuti unzwe kugamuchirwa uye kugamuchirwa.
Unogona kunge usiri kutaura zviri mukati mako pfungwa, zvishuwo, uye zvishuwo nenzira yakajeka, yakapfupika kune vanhu vakakukomberedza. Kana iwe uine zvaunoda kana zvaunoda, iwe unofanirwa kuzvitaura zvakajeka kune vateereri vanoteerera.
zvekutaura kune munhu achangorambana
Bhura pahunyanzvi hwako hwekutaurirana. Fungisisa matauriro aungaita zvinhu zvinoda kutaurwa uye kudzidzira, tsika, tsika. Kutaurirana ihwo hunyanzvi hunoda kukwidziridzwa nekudzidzira nekufamba kwenguva.
3. Hausi kunzwa zviri kuedza kutaurwa nevamwe.
Imwe hafu yekutaurirana iri kuteerera uye kunyatsonzwa zvinotaurwa nevamwe vanhu. Iyi ihwo hwakasiyana zvachose, hunyanzvi hwakasarudzika hunoda kugadzirirwa pachahwo.
Vanhu vachataura zvakawanda zvinhu, asi vamwe usateerera nguva dzose nechinangwa chekunzwisisa. Pane kudaro, ivo vanoteerera kune izvo munhu ari kutaura uye vobva vamanikidza ivo pachavo pfungwa, maonero, kana zvitendero pamashoko emumwe munhu.
Vanogona kungofungidzira kuti dzimwe pfungwa, manzwiro, kana zviito zvinotsigirwa nezvakakurudzirwa zvakasiyana kunze kweizvo zvakataurwa nemutauri wekutanga.
Iko kugona kuteerera kwakakosha pakukurukurirana kwakajeka uko kunogona kubatsira mapato ese kuti anzwe kunzwisiswa uye nyore nyore kusvika pakubvumirana pazvinenge zvichidiwa.
Nyaya inoenderana: Zvakavanzika zvisere zvekutaurirana zvinobudirira
4. Iwe kana vanhu vakakukomberedza vari kuchinja nekukura.
Hupenyu hunoitika. Makore anoenda vanhu vachichinja, pamwe pacho vachiita zvirinani uye pamwe pacho pakuipa.
Shamwari uye nhengo dzemhuri hadzisi nguva dzose kuvapo kusingagumi muhupenyu hwako. Sezvo nguva inopfuura uye vanhu vachichinja, ivo vanozopedzisira vachida kufamba vachidzika nemigwagwa yavo.
Vanogona kuenda kukoreji, kunoroora, kana kuenda kunzvimbo nyowani kunotsvaga runyararo rwepfungwa uye mufaro.
Shanduko iri kuuya kana tichida kana kwete. Hatina sarudzo mune iyi nyaya. Zvatiri unokwanisa kusarudza kusarudza kukumbundira shanduko uye kufamba nayo, tibvumire isu kukura uye kushanduka nehupenyu pane kurwisa kwazviri.
Nhau dzakanaka ndedzekuti kune vanhu vazhinji kunze uko munyika vanozounza zvakawanda kuhupenyu hwako, sekuda kwako kune kwavo. Iwe ungofanire kuramba uchifamba uchienda kwavari.
'Handina Shamwari' - Zvekuita Kana Ndiwe Iwe
Nzira Yekuita Nekusurukirwa Uye Kurarama Nekunzwa Kwekuzviparadzanisa
9 Zviratidzo zveKakwirira Kwemagariro Evanhu
Maitiro Ekuumba Shamwari dzepedyo Neavo Wakatotandara Navo
Maitiro Ekuita Shamwari Semunhu Mukuru: Tsvaga Uye Ikure Hutsva Hutsva
Ungaita Sei Kuti Ufare Wega: Mazano gumi Ekurarama Uye Kuve Iwe wega
17 Mibvunzo Kuti Upindure Paunenge Uchinzwa Kusiyiwa Kana Kusiyiwa
Kana Iwe uri weLoner, Iwe Unozonzwisisa Aya mapundutso 9 Kuti Uve Mumwe
5. Iwe kana vanhu vakakukomberedza wakanamatira uye wakamira.
Iko kushushikana kwekunzwa kunamira kana kumira uko kunogona kukonzera manzwiro ekuzviparadzanisa uye kusurukirwa. Izvo zvinogona kuve chero chinhu kubva kune husina hukama hukama kune basa iro risingangopi chero chero dhigirii rekuzadzikiswa.
Kupfuurirazve, kana iwe uri mhando yemunhu anofarira kunakidzwa kana kunakidzwa, kunzwa kubatikana pasi kana kusasimudzirwa kuri kuzonzwa kusurukirwa.
Dzimwe nguva, iwe unongofanirwa kubuda kunze kwetsika iyoyo uye wosanganisa zvinhu zvishoma! Pamwe inguva yekushandurwa kwebasa, kutora chido chitsva, kutora rwendo rwemugwagwa, kana kutombofamba kuenda kunze kwenyika - chero chinhu chekuparadza monotony zvishoma uye nekufema mweya mutsva.
ndoita sei kana ndabhowekana kumba
6. Unogona kunge uine hutano hwepfungwa hunoda kugadziriswa.
National Alliance yeMental Illness inofungidzira kuti vangangoita 1 muvanhu vakuru vana vari kurarama nechirwere chepfungwa chinoonekwa.
Kune zvimwe zvirwere zvepfungwa zvinogona kubatsira kuti unzwe kunge uri wega kana wega. Kushushikana munharaunda, kushushikana, uye zvimwe zvirwere zvepfungwa zvinogona kuita kuti munhu anzwe kusanzwisiswa uye sekunge akamira zvakakwana oga munyika izere nevanhu.
Nhau dzakanaka ndedzekuti nyaya zhinji dzehutano hwepfungwa dzinogona kutarisana nekukunda! Munhu anogona kuwana kurapwa kuchibatsira, anogona kudzidza nzira dzekutarisira nekuderedza iwo manzwiro akashata, kana angangoda chimwe chinhu zvakare.
Kana kunzwa kwako kwekusurukirwa kuchiramba kwakasimba kana kwakanyanya, iri zano rakanaka kutaura kune mupi wezano pamusoro pazvo. Ivo vangangove vanokwanisa kukubatsira iwe kuziva sosi yemanzwiro iwayo uye nekuwana nzira yekuvandudza paari.
7. Unogona kunge uchigara munzvimbo ine tsika yakashata inokodzera.
Unoziva chii? Vamwe vanhu vanongonzwa sekunge havasi vemamwe matunhu. Izvi zvinopinda munzvimbo isina kusimba umo manzwiro anogona kumhanya kumusoro uye vanhu vakasiyana vanodudzira nyika nenzira dzakasiyana.
Vhura pfungwa vanhu zvingasaita zvakanaka muhuwandu hwevanhu vane pfungwa dzakavharwa. Pamwe iwe unotarisa, kupfeka, kana kuita nenzira inosiyana zvakanyanya kupfuura vanhu munharaunda menyu, nokudaro isina kukodzera mune zvakanaka munharaunda.
Shanduko yenzvimbo uye nharaunda kune imwezve inowirirana nezvauri iwe semunhu angave akarongeka! Iko hakuna chikonzero chaicho chekushandisa hupenyu hwemunhu hunoshungurudza uye husina mufaro, uchigara munzvimbo yavanogona kunzwa kudzingwa kana kusatambirwa.
Izvo zvakanaka kuve zvauri uye kuti unzwe manzwiro aunoita, asi chokwadika, munhu wese ari munyika anogona kusabvumirana. Kuenda kunzvimbo ine vanhu vanodakadza inogona kunge iri sarudzo iri nani.
Nyaya inoenderana: 24 Mibvunzo Yekubvunza Usati Wasiya Zvese Kuseri Kuti Utange Hupenyu Hutsva
8. Unogona kusatambira zvakakwana kune mikana yakakukomberedza.
Vanhu vakawandisa kwazvo vanofunga kuti shamwari nemikana ichauya ichirovera pasi musuwo wavo.
Izvi hazvisi kuzoitika.
Iwe unofanirwa kuve unodisa kuzviisa iwe kunze uko kana iwe uchida kuita chero chinhu, kungave kuri kuita shamwari nyowani, kuwana kugamuchirwa, kudzidza chimwe chinhu chitsva, kana kuvandudza basa.
Uyezve, vanhu vane tsika yakaipa yekutarisa mikana inogona kunge iri pamberi pavo chaipo. Zvichida vanhu avo vakasiyana newe vari kuyedza kukugamuchira zvakanaka nepavanogona napo.
maitiro ekubvunza mumwe munhu pamusoro pemavara
Haasi munhu wese ari kuzokunzwisisa kana nzira yaunoda kurarama hupenyu hwako uye ungasanzwisisa yavo. Kuita kuyedza kubvarura mukaha nenzira isingakanganise iyo yakakosha zvikamu zvako inzira yakanaka yekuwana kubatana nevamwe vanhu.
Unogona kuve nenguva yakanaka neanenge chero munhu kana iwe uri akavhurika uye unoteerera kwavari.
Kunyemwerera uye kuseka zvinodarika zvipingamupinyi zvakawanda munharaunda.
Hauna chokwadi chekuita nezve kunetsekana kunzwa kuti hausi wako? Taura nemupi wezano nhasi anogona kukufambisa nenzira iyi. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
sei vanhu vachida kuva vega
sei vamwe vanhu vachizvida zvakadaro
sei zvakaipa zvichiitika kwandiri
kusaina narcissist arikubiridzira
murume wangu haatombotauri neni nezve chero chinhu
maitiro ekuziva kana shamwari yako iri yekunyepedzera